DHUKKUBOOTA DUBARTOOTA QOFA HUBAN KEESSAA…kan fayyisuun ulfaatu, garuu ittisuun fala ta’u;Bilisummaa Gadaa Ifaa’tiin (BGI) – Beekan Guluma Erena
DHUKKUBOOTA DUBARTOOTA QOFA HUBAN KEESSAA…kan fayyisuun ulfaatu, garuu ittisuun fala ta’u;Bilisummaa Gadaa Ifaa’tiin (BGI)	Beekan Erena
HEALTH May 19, 2016OROMO
338SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Dhukkuboota dubrtoota qofa huban keessaa…kan fayyisuun ulfaatu, garuu ittisuun fala ta’u;
Guyyaa tokko abbaan manaa iddoo hojii oolee dadhabee gara manaa gale. Haati manaa isaa isa dura galtee turte. Yeroo inni galuu “adaraa narraa ba’i…himmmm…karuma dhufte deebi’ii qajeeli” jettee itti oriite. Namichis isheen ofitti dhiyeessu dhorkinaan naheetuma gumgumaa, huccuu isaa dachaafatee gara sanyoo isaa takka bira fiigaa deeme. Akkuma achi gayeen isheenillee saree itti gadi dhiistee ariite…kanuma mana isaatii isa baasetu harka ballisee simate.
Dubartootni kunneen eessa oolan seetan! Diree leenjii raayyaa biyyaa akka sinitti hin fakkaanne, ogeeyyii dhimma fayyaa hawwaasumaa irratti hojjetaniin waayee fayyaa isaanii barachaa oolan. Maaltu lola fideeree jara keenya? Mee waan isaan baratan kana yaa ilaallu:
 Dhukkuboota dubartoota qofa huban ittisuu; kanneen akka,
• Kaanserii harmaa,
• Fistula qaama saalaa dubartootaa
• Kaanserii afaan gadaamessaa (Cervical ca)
• Kaanseriiwwan gadaamessaa fi qaamota isaanin walitti jiranii fi k.k.f barachaa oolan.
Guyyaa sanaaf xiyyeeffannoon kaanserii afaan gadaameessaa irratti oole. Haala kanaan baratan
 Dhibeen kun baayyinaan kan dhufu vaayirasii gosa “Human Papillomavirus”jedhamuuni dha. Biyyoota guddinaan sadarkaa gadi aanaa irra jiran kana keessattis hedduu baballachuu irraa kan ka’e kaanserii keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argama, nama hedduus ajjeesaa jira. Fknf, akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaa (World Health Organization report) bara 2012tti, addunyaarratti dubartoota lakkoofsan 270 000 ta’antu dhibee kanaan lubbuu dhabe.
 Akkuma beekkamu dhibee kaanserii fayyisuun waan rakkisuuf osoo hin dhukkubsatin ittisuun gaaridha. Vaayirasii Kaanserii afaan gadaamessa kana kan baatu dhiirota, dhibee kanaan kan hubamu dubartootadha, quunnamtii saalan daddarba jechuudha. Kanaafuu; “Silaa osoo bookee busaa ta’ee agoobara itti haguugnee balleessina turee”, dhiirota kana maaluma goonakaa…!!!!!jedhanii walitti ususaa turan dubarttotni kunneen barnooticharratti. Dhugumattuu nama hin dhibuu haallii dubbii kanaa? Itti yaa yaadnu.
“Walii galan alaa galan” jedha mitiiree Oromoon. Waluma gargaaree salphisuu dandeenya. Jalqabarratti, quunnamtii saala umurii daa’imummaa hambisuu, qunnamtii dhiirota hedduu wajjin yookin dhiira nama hedduu wajjin quunnamtii godhu wajjin gaggeessu dhiisu, dhiirota kittaansisuu……Kanaan alatti malli jiru duursanii qoratamuu fi talaallii dhibee kanaa fudhachuunis ni barbaachisa.
≠ Itoophiyaan garuu hanga bara 2015tti taalallii kana hin eegalle, gatii isaa waan dadhabdeef. Tarii dhibeen kun hanga agaazin nama fixaa jiruuyyuu hin ajjeesne jedhamee yaaddamees ta’uu malaa, ani garuu quba hin qabu.
• Namni vaayirasii kanaan tuqame (infected) hundi kaanserii kanaan qabama jechuu miti!
• Tamboo xuuxuu fi dhukkubootni akka HIV, kanneen humna dhibee namarraa ittisu huban hundi carraa dhukkuba kanaan qabamuu ni ballisu.
• Dhibeen kun gara kutaa qaamaa biroottis faffaca’uun dhiibbaa guddaa geessisuu danda’a
Mallattooleen dhukkuba kanaa,
 Dhangala’aan fooli yaraa qabu karaa qaama saala dubartittii dhangala’uu
 Yeroo quunnamtii godhan dhukkubbiin itti dhaga’amuu
 Dhiigni darbee darbee karaa qaama saalaa bahuu, keessattuu wal-quunnamtii saalaa booda
 Dhukkubbii dugdaa, miilaa fi tafaa (pelvic pain)
 Dadhabsiisuu, huuqqisuu, fedhii nyaataa dhowwuu fi k.k.f
Garuu namni mallatoollee kanneen qabu diraqama kaanserii qaba jechuu miti. Ogeessa mariisisuun dirqama. Mallattoo agarsiisun duras sadarkaa hammaataa irra gahuu danda’a. Kanaaf, dubartootni hundi yoo ogeessa fayyaa of ilaalchisan gaaridha (screening)
Eegaa, dubartootni akkanaan dhiirota asii fi achi jedhurratti duulutti ka’ani. Balleessaa qabuu?
Garuu ilmaan Abbaa Gadaa amala akkanaatiin waan hamatamanillee hin se’uu, waanuma hundaafuu of eegnee lubbuu jaalalleewwan keenyaa eeguun gumaacha guddaadha .
Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa338SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← -BAGUMAN DHALADHE!!-Dr. Dhinsa Yonas
Asoosama “DHEEBUU JAALALAA” KUTAA 2FFAA-Rbuma Ggcn’tiin →